Uma endlini kukhona ukubuyisa kancane, abanikazi ngokushesha ebuza indlela ukondla hamsters ekhaya, ukuze uzizwe ungumqemane futhi ngiphile impilo ende. Kuyadingeka ukuba ngokushesha sicacise ukuthi ukudla kungahlali etafuleni, ngoba lokho umuntu odla, angabangela ukuba abantu bafe isilwane. Kusukela Ukudla kufanele ukubeka eceleni ukudla okunoshukela nokudla okunamafutha, ezifana imbewu sunflower, candy, ushokoledi. Indawo yemvelo nempuku odla izinambuzane, izibungu, izibungu, kodwa ukudla esiyinhloko kuye - ukudla zemifino.
Ngakho, yini ukondla hamsters ekhaya, ukuba abenzele supply ezidingekayo amavithamini nezakhi? Njengazo zonke namagundane, bathanda corn. Lokhu kungaba oats, uphizi, ukolo, amantongomane, ummbila. Ungakwazi ukulungiselela ingxube, futhi angathengwa at isilwane esitolo okuphakelayo eseqedile, nalo mzimba. Ungase futhi ukuthenga ibhandiwe okusanhlamvu izinduku. Benza izinto zibe lula sinamathele imigoqo iseli, kanye hamster uyoba nethuba ukuze uthole baziphilise, futhi ngesikhathi esifanayo schesyvat amazinyo phambi ukuthi kuyadingeka kangaka kwalezi fidgets. Ungase futhi ufake hay kancane ukuba yikudla, ukwakhiwa esidlekeni.
Yini ukondla hamster ekhaya okwamanje, ngakho-ke ifolishi eluhlaza. Ziyakwazi kakhulu othanda amacembe e-dandelion, kakolweni lwegciwane. Kufanele afake ekudleni imifino isilwane ezifana zucchini, beet, amazambane, ukhukhamba. Namagundane bathande futhi izithelo: amabhilikosi, ithini lamapheya, apula, amapentshisi, ubhanana. Kufanele ukulahla ikiwi izithelo, izithelo ezisawolintshi, garlic, iklabishi no-anyanisi. Le mikhiqizo kabi kugaywe futhi abangele ukubuyisa.
abanikazi abaningi, ukucabanga, kunalokho ungakwazi ukondla hamster, nayilezi namagundane inyama, kodwa akunjalo. Endle ukudla isilwane. Yiqiniso, akudingekile ukuba ondle Isidlo isilwane sakhe, yena ungenza amakhambi nokusanhlamvu, kodwa namanje ushintsho amnike amaprotheni isilwane awukwazi ubuhlungu. Hamster ukulingana izingcezu ezincane inyama okuphekwe, amathambo amancane yenkomo, ushizi, aklaba olukhulu lwezilokazane ezihlanganisa ufulawa ibhungane. okuphakelayo ezinjalo kumele inikezwe kanye ngesonto, hhayi ngaphezulu.
Akubalulekile nje kuphela lokho ukondla hamsters ekhaya, kodvwa nangaloko kobukhulu. Namagundane musa overfeed, njengoba sithambekele lube yimbangela yokukhuluphala. Zonke ukudla kufanele kube fresh. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukudla okubolayo yayidlelwa ngokushesha, kungenjalo kumele asuswe cell. Futhi ungathintana Ungakhohlwa mayelana amavithamini namaminerali, ungathenga amaphilisi akhethekile awathulule ku ukudla, futhi ungakwazi ukuthenga amasondo ukuthi hamster gnawing bebodwa. Indlela yesibili akukhetha, kusukela isilwane kuzothatha kakhulu ngendlela umzimba udinga ke.
Abaningi bacabanga ukuthi ukondla hamsters kancane uma bedinga amanzi. Ukudla kufanele cishe kuyafana abadala. Namagundane amanzi ikhiqizwa izithelo namanzi nemifino, kodwa futhi kusukela abaphuza akufanele lenqabe. Bowl kungcono hhayi, ngoba kulula Pheqa. Of ekhethekile hamster abaphuza ziphuze njengoba oyifunayo, lapho kungenziwa wathela amanzi nje kuphela kodwa futhi ubisi.
Hlobo luni inja - German yak Terrier?
Hamster Roborovskiy: ukunakekelwa, okuqukethwe, uhlamvu, izindleko